Halatra fiara 4x4 : Any amin’ny Fitsarana ny raharahan’ilay pasitera malaza
Araka ny loharanom-baovao dia efa eny amin’ny FItsarana amin’izao fotoana izao ny antontan-taratasin’ady mikasika ilay halatra fiara 4x4 marika Toyota Land Cruiser…
…na dia miezaka mifanaraka ihany aza ilay mpitandrina nahatrarana ilay fiara sy ilay tena tompony. Roa volana lasa izay no efa tsy hita io fiara io ary tao amin’ny fonenan’ity pasitera malaza iray, mpitarika antokom-pivavahana iray eto an-drenivohitra no nahatrarana azy. Efa niova loko sy nisoratra amin’ity mpitandrina ity ilay fiara tamin’ny fotoana nahitana azy.
“Ny zanak’ilay pasitera mihitsy no tena voarohirohy nangalatra ilay fiara. Ilay pasitera kosa dia mety hoampangaina ho nividy halatra ihany. Tsy nanaiky mora foana ilay tena tompon’ny fiara amin’izao fotoana izao, fa mitaky vola an-tapitrisany maro mba ho sandan’ny fanamboarana azy. Efa nahitana fahasimbana mantsy ilay fiara nandritra izay roa volana tsy nahitana azy izay”, hoy ny loharanom-baovao.
Na izany aza anefa dia fantatra fa mbola miezaka mifampiraharaha amin’ny tompon’ilay fiara hatrany ilay mpitandrina. Tsy maintsy hizotra hatramin’ny farany ihany koa anefa ny fanadihadiana eo anivon’ny Fitsarana mahakasika ity raharaha ity. Tsy mbola nisy aloha hatreto ny fitanana am-ponja vonjimaika ireo voarohirohy.